Macluumaadka Farshaxanka Ota Ward Dhaqanka "ART bee HIVE" vol.1 + bee! | Ururka Dhiirrigalinta Dhaqanka Ota Ward
Soo saaray 2019/10/1
vol.1 Arrinta koowaad
Farshaxanku waa inuu ku noolaado maaddo Bulsho kasta oo qof kastaa ka yahay “farshaxan”
Mr. Tanaka wuxuu ku lug lahaa horumarinta bulshada, ganacsiga dhaqanka, iyo shaqada bulshada tan iyo markii uu ku soo biiray dhismaha ganacsiga qoyska iyo dhismaha ee bartamihii 2004-yadiisii ​​20.Waxqabadyada sida mashruuc lagu midabeeyo meelaha caamka ah sida saldhigyada iyo jardiinooyinka aagga Tamagawa oo leh farshaxan casri ah, maareynta aagga iyada oo loo marayo ka faa'iideysiga waddooyinka iyo meelaha caamka ah ee aagga ka bixitaanka bariga Kamata, iyo dadaallada lagu gaarsiinayo farshaxanka carruurta sannadihii la soo dhaafay. Meelo badan baa jira.
"Marka aan ka hadlo mashaariicda la xidhiidha farshaxanka, kaalinteydu waa inaan noqdo soo saare. Wada-hawlgalayaashu waa khabiiro noocyo kala duwan sida agaasimayaasha farshaxanka, farshaxanleyda, iyo naqshadeeyayaasha. Iyadoo lagu saleynayo qorsheynta, maalgelinta, wadaxaajoodyada kala duwan, iwm, maaraynta horumarka, xiriirka bulshada, iwm Sidoo kale ku lug leh "
Mr. Tanaka, oo markii hore u hamuun qabay dhinacyada farshaxanka wanaagsan (* XNUMX) iyo nashqadeynta, wuxuu bilaabay inuu la shaqeeyo fanaaniinta firfircoon ee safka hore markii ugu horreysay waxyar kadib markii uu ku soo biiray shirkadda.Xitaa isagoo leh aqoon durugsan, weligiis kuma fikirin inuu ku lug yeelan doono adduunka.
"Xaqiiqdii waxaan kula noolahay duurka, wajahitaanka bulshada iyo aadanaha, iyo inaan isla fikiro. Waxaan ku riyaaqay xiisaha dhabta ah ee aan uqabayo sidii shaqo hortayda taal. Tani wali waa isku mid maya wax la yiraahdo "foom dhammeeyey" oo ku jira shaqada dadka, markaa waxa muhiim u ah mashruuc kasta waa inaad naftaada geliso xaaladda oo aad ka qayb gasho. Wixii meesha ka dhaca waa wax shakhsi ah, laakiin maxaa loo marayaa? waa mid caalami ah oo ku saabsan sida loo dareemo loona fikiro. Waxaan u maleynayaa in ka qeyb qaadashada noocan ahi ay ku dhowdahay dareenka maamulida nooc ka mid ah bulshada. "
Dhismaha Atelier "HUNCH"
Mudane Tanaka, oo hadda ku hawlan hawlo kala duwan oo is barbar socda, xoogga dhaqaajiya ayaa ah "in" hadda "magaalada" iyo nolosha aadamuhu ay dhab ahaan u socdaan jihada farxadda. "
"Tan iyo markii aan bilaabay ka shaqeynta mashruuc farshaxaneed dadweyne, su'aasha ah waxa ay dadweynahu yihiin iyo cidda farshaxanku iska leeyahay waligey igama tegin. Tusaale ahaan, sidoo kale waxaan ku lug leeyahay maareynta aagga aagga laga baxo ee bariga Kamata." "Waxay ahayd inay ahaato meel ay dadku ku noolaadaan, laakiin intii aanan ogayn waxay noqotay meel gaadiidka laga qaado oo keliya, waxaana maamula booliiska iyo dowladda. Meesha noocan oo kale ah waxaa lagu magacaabaa" fagaare dadweyne ". marka hore, meesha dadku ku qabaan su'aalaha noocan oo kale ah isla markaana sii wadaya dib u qeexida waxay noqon kartaa goobta dadweynaha. "
Rinjiye ku meelgaar ah
"Magaalo" oo ah meel caam ah iyo meel nolosha aadamuhu ku nool yihiin.Mr. Tanaka wuxuu ka hadlay xiriirka ka dhexeeya aadanaha iyo "magaalooyinka" iyo isbadalkooda, isagoo tusaale u soo qaatay dhaqanka caanka ah.
"Aniguba waan jeclahay muusigga, laakiin mar waxaan ogaaday in jiritaanka" magaalo "laga waayey heesaha muusiga. Qiyaas. Jabaan, illaa 1990kii, doorka hoggaamineed ee heesaha pop-ka wuxuu ahaa. Waxay ahayd" magaalo ". Sheekada ee "aniga iyo adiga" heesta jacaylka sidoo kale waxay ahayd sheeko magaalada dhexdeeda ah. Waxay macnaheedu tahay inay magaalada ku sugnaayeen wax badan oo la mid ah "Aniga" .Waxaan u maleynayaa inay magaalo muhiimad ahaan tahay koox ka mid ah waxyaalahan. ereyada, dadku waxay isku xiriiraan sida jirka ugu weyn, iyadoon loo eegin inay iyagu qaraabo yihiin iyo in kale. Waxaa lagu magacaabaa "Round World (* 2)". 90-meeyadii, magaaladu waxay noqotay asalka annaga, taasi waa , marka laga hadlayo, jiritaanka magaalada wuxuu noo noqday "shay" .Si kastaba ha noqotee, bartamihii 90-meeyadii ka dib, xitaa shaygii waa la waayey, sheyga u kuur galkuna wuxuu noqday "is".
Mashruuca Khadka Farshaxanka ee Tamagawa "Saldhigga Numabe ee Tokyu Tamagawa"
* Sheeg waqtigaas.Hadda maahan.
Mr. Tanaka wuxuu u maleynayaa in ifafaalaha noocan oo kale ah ay calaamad u tahay in "dadku aysan mar dambe ku sii jiri karin magaalada."Xilligan la joogo markii ay horumarsan tahay raasumaalka warshadaha, dadku waxay awood u yeesheen inay ku noolaadaan nolol ammaan ah, raaxo leh oo ku habboon nolosha magaalooyinka oo cimrigooda la dheereeyay, laakiin gobolka magaalada "giraantii" bey'adda ayaa la jaray "Haddii ay jiraan.
"Hadda, meeshii ay dadku wax ku abuuraan, taas oo ah waxqabad bani'aadamnimo, ayaa ka sii baaba'aya magaalada iyo nolosha. Nolosha dad aan tiro lahayn ayaa noqda sheekooyinka magaalada, sheekooyinka magaaladuna waxay ku soo biiraan nolosha dadka- Waxaan ahay goob fagaare ah. Laakiin waxaan rajeynayaa inaan dib u helo dunidaas.
* 1 Fikradda waxqabadka farshaxanka iyo qaabka.Waxay macnaheedu tahay farshaxan saafi ah oo ka soo horjeeda farshaxanka caanka ah.
* 2 Fikrad uu ku doodayo bayoolaji Jarmal ah Jacob Johann von Yukscur.Dhammaan nooluhu kuma noola adduunyada ujeeddada, laakiin waxay ku noolyihiin "adduunka bey'ada" ee si addunka u abuura adduunka aragtida iyo qiyamka nooc kasta. (Yukusukuru / Kriszat, waxaa turjumay Toshitaka Hidaka et al., "Adduunyada laga Arkay Waxyaabaha Nolosha", 2005, Iwanami Bunko)
Bar farshaxan + bee!
"Fanka Hiroshi Senju ee garoonka diyaaradaha Haneda"
Xiriirka ka dhexeeya Madaarka Haneda iyo farshaxanka Senju
Shaqooyinka farshaxanka ee Hiroshi Senju waxay ku kala firdheen hareeraha Madaarka Haneda, irridda cirka ee Ota Ward.
Xidhiidhka ka dhexeeya Madaarka Haneda iyo farshaxanka Senju wuxuu bilaabmayaa 1, markii Terminal 1993 la furay.
Bilowgii furitaanka matxafka, waxaa jiray qorshe lagu soo bandhigayo shaqooyinka farshaxanka (farshaxanno, walxaha, ranjiyeyaasha, iwm.) Ee fanaaniinta soo koraya ee imanaya, mid ka mid ah fanaaniinta soo socdana wuxuu ahaa Mudane Senju.Intaa ka dib, wuxuu caan ku noqday adduunka, sida ku deeqa sawir gacmeedyada iyo helitaanka abaalmarin sharafeedkii ugu horreeyay ee ah Oriental ee qaybta rinjiyeynta ee Venice Biennale 1995, iyo 2004, wuxuu dhisay Terminal 2. Waqtigaas, Mudane Senju wuu shaqeyn doonaa shaqada sidii meel loogu soo dhoweeyo isaga oo ah soo saare farshaxan oo adduunka loo diro.Intaa ka dib, wuxuu ka shaqeeyay furitaanka terminal-ka caalamiga ah sanadkii 2010, iyo garoonka diyaaradaha ee Haneda, waxaad ku raaxeysan kartaa shaqooyinka farshaxanka ee Mr. Senju oo keliya duulimaadyada dalka gudihiisa ah sidoo kale sidoo kale duulimaadyada caalamiga ah.
Maaddaama fikradda Terminal 2 ay tahay "bad", shaqadu inta badan waxay ku jirtaa "buluug".Fikradaha iyo farriimaha Senju waxaa lagu soo daray mid kasta oo ka mid ah sawir gacmeedka, kaas oo muujinaya xiisaha safarka ka hor safarka iyo gargaarka ka dib imaatinkiisa.
Hiroshi Senju "Dooxada Dabaylaha" Terminal-ka Gudaha 2
Fikradaha Mr. Senju ee shaqada
Duulista hawada sare waxay ahayd riyo ay dadku aaminsan yihiin ilaa waqtiyadii hore.Maalmahan, diyaaraduhu si caadi ah ayey u duulaan, laakiin baalal waaweyn oo dhabarka ku sita, waxaan dhug u yeelanay fikradaha awoowayaasheenna fog, waxaana ku soo qaadannay sawirro cirka iyo dabeecadda garoonkan.
Waxaan ku sameeyay mala-awaalka dadka sawiray sawirrada godadka Paleolithic ee dareemay xiriirka ay la leeyihiin koonka xayawaanada leh geesaha u eg dayaxa iyo baalasha jirkooda.
Hiroshi Senju "MOOON" Terminal-ka Gudaha 2
Dadku waxay dareemeen qarsoodi waxayna ku beero maankooda xiddigaha ka soo ifaya masaafo aad u weyn, laakiin sidoo kale waxaan doonayay inaan sawiro wax la mid ah aragtidaas.
"Harada xeebta subaxdii" "harada xeebta"
Waxaan dareemay inay tani tahay mid mucjiso ku ah koonka, waana sawiray.
Hiroshi Senju "harada subaxda" guriga dhexdiisa Terminal 2
Leonardo da Vinci, oo doonayay inuu cirka u duulo, wuxuu leeyahay, "Aragtida fog oo dhan waxay u dhowaaneysaa buluug."Aniga oo taas maskaxda ku haya, waxaan abuuray shaqo ku dhisan buluug.
Sidoo kale meeshaas oo kale! ??
Shaqooyinka farshaxanka ee Senju ayaa ku kala firirsan duulimaadyada gudaha iyo kuwa caalamiga ah.
Duulimaadyada gudaha waxay ku yaalliin meel aad ku arki karto adiga oo aan diyaarad raacin.Hal dariiqo oo loogu raaxeysto waa booqashada garoonka diyaaradaha iyadoo la raadinayo halka ay shaqadu ka jirto.Meelaha aadan ka heli karin adigoon kor u eegin, ama meelaha sidan oo kale ah! ??Waxa kale oo jira shaqooyin iyo sharraxooyin meesha lagu rakibay!
Intaas waxaa sii dheer, shaqooyinka duulimaadyada caalamiga ah ayaa laga dhisi doonaa aaga bar kontorool ee amniga, markaa fadlan raadi shaqooyin markii aad fursad u hesho inaad ka soo gasho ama ka baxdo garoonka diyaaradaha ee Haneda.
Shaqooyinka Terminal 2 sidoo kale waxaa lagu soo bandhigey websaydhka Haneda Airport.
Qofka masuulka ka ah garoonka diyaaradaha ee Haneda ayaa yidhi, "Maarso 2020, Terminal 3 wuxuu noqon doonaa terminal duulimaadyada gudaha iyo kuwa caalamiga ah, laakiin marin looga dhigo cirka Japan, farshaxanka Japan maahan oo kaliya Jabaan laakiin sidoo kale ajaanibta. Waxaan rajeynayaa inaad ku raaxayso shaqada oo aad dareento fikradaha iyo fariimaha Mr. Senju. "
Fadlan booqo goobta farshaxanka ee Haneda Airport.